नेताको व्यवस्थापनमा अड्कियो एमाले–माओवादी एकताको गाँठो ? - Everest Dainik - News from Nepal
नेताको व्यवस्थापनमा अड्कियो एमाले–माओवादी एकताको गाँठो ?
काठमाडौं – एकीकृत पार्टीमा दुई पक्षका नेताको व्यवस्थापन कसरी मिलाउने भन्नेमा एमाले–माओवादी एकताको गाँठो अल्झिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा यो समाचार छापिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस जनताले चाहेको विकास तुहिने पो हो की !
‘चुनौती छन् तर पनि नेतृत्वले नेताहरूको कार्यक्षमता र दोहोरो जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने विधिलगायत मापदण्डका आधारमा व्यवस्थापनको नीति बनाउनुहुन्छ होला,’ माओवादी नेता नारायण शर्माले अन्नपूर्णसँग भने। दुई पार्टीबीच कार्यदलले प्रस्तावित गरेको केन्द्रीय समितिमा प्रतिनिधित्व कसरी गराउने भन्नेमै दुईथरी मत देखिएको छ।
याे पनि पढ्नुस कैलालीमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट लेखराज भट्ट लगायतको मनोनय दर्ता